Ingxelo eBanzi kwiMarike yeeKawusi zeMidlalo 2021 | Iindlela, iMfuno yokuKhula, Amathuba kunye noQhekelelo ngo-2027
ngu admin on 21-04-25
Uphando lweMarike yeeKawusi zeMidlalo yingxelo yobukrelekrele enemigudu ecokisekileyo eyenziwayo yokufunda ulwazi oluchanekileyo noluxabisekileyo. Idatha ethe yajongwa yenziwa kuthathelwa ingqalelo zombini, abadlali abaphezulu abakhoyo kunye nabakhuphisana abazayo. Izicwangciso zeshishini zabadlali abaphambili kunye ne...
Ukuqinisekisa ukhuseleko lweemveliso zethu kunye nabasebenzi
ngu admin nge 20-02-21
Ukusukela ukuba inoveli coronavirus inyumoniya yenzeka e-China, thina i-UBUY sithatha amanyathelo asebenzayo ukwenza umsebenzi olungileyo wokuthintela ubhubhane kunye nomsebenzi wokulawula. Nangona umzi-mveliso wethu ungekho kwindawo engundoqo, sisawuthatha nzulu. Ngomhla wama-27 kaJanuwari, siye saseka iqela likaxakeka lothintelo & nesenzo kwaye si ...